Intetho ezinekratshi, Uzuko kuThixo — UHAMBO LEE
Abadala ngendlela efanayo. Ngokufuthi siza Kulungile ekwenzeni izinto akuhambi sifanele senze, logama nje umntu kufuneka aphendule ukuba akafuni ukufumana. Ukuba siyavuya ukuba ikhawuleze ude ubone rhataa phambili. Mhlawumbi siyavuya ukushiya umsebenzi kwangethuba nje umqeshi yethu angasifumani. Mhlawumbi abanye bethu ngokukrexeza iimvavanyo nje ngunjingalwazi bungasifumani kuthi. Thina abadli andikhathali, ukuba abantu bayazi esiyenzayo into engalunganga, ngaphandle kokuba igunya kufuneka ukuphendula.
e 1 Samuel 2, UHana uthandaza ukuphendula ngokuzalwa unyana wakhe uSamuweli. Kwaye lo mthandazo, Uyalumkisa abanye ukuba benze isono esithile omnye, kuba nguMgwebi ibukele. Kutyhila kunye nam 1 kaSamuweli isahluko 2, ivesi 3.
Musa ukuthetha izinto eziphakamileyo, okanye ke umlomo wakho uthethe ikratshi enjalo, ngokuba uYehova nguThixo owazi, kwaye nguye nezenzo bacinezelekile.
Embhalweni, UHana isilumkisa nxamnye intetho nekratshi, kuba uThixo uya kufumanisa ubambe uyakuwu sibe netyala. Yiloo nto ndicinga ingongoma ephambili kule vesi: Ukuba uthetha ngebhongo, uya kuziphendulela kuThixo ngayo.
Siza Ungahendeka ukuba bacinge amazwi ethu nekratshi na umcimbi kakhulu. Kodwa xa ucinga amazwi akho nekratshi musa Akukhathaliseki, Ndiyoyika ukuba. Kufuneka ibalulekile kuwe, kuba loo nto kuThixo, kwaye nguYe kufuneka uphendule ukuze. Asiyi ekugqibeleni kuphendula abazali bethu, okanye abahlobo bethu, okanye bethu fundisi, kodwa uThixo.
Unoko engqondweni, Ndifuna ukuba abuze imibuzo embalwa ukuqonda ngcono itekisi.
umbuzo 1: Kuthetha ukuthini Thetha neQhayiya?
Kuthetha ukusebenzisa amazwi enu ukuba usazenza.
Ngoku siya kucinga amagama self-yokuqala nje ukuqhayisa ngokulula ngendlela emangalisayo thina, kodwa kukho ezininzi iindlela ukuthetha ngokuzingca. Kwaye ndiyacinga enye yeendlela ukuba uHana wayecinga nto sibona kwisahluko 1.
UHana ngumfazi wendoda egama belinguElikana. Yena umfazi kuphela yakhe nangona. Yena umfazi elinye ogama uPenina. UPenina ke wayenabantwana, kodwa uHana wayeludlolo. UPenina wayeza ngokusisiseko angcikive uHana ngalo. Kwaye ngenxa ludlolo kwakhe kwaye oku uHana ondingcikivayo Waba buhlungu kwaye wayelila.
Ndicinga uPenina ngumzekelo lwentetho nekratshi uHana ulumkisa. UPenina akazange esalatha nje phandle into yokuba abantwana. Uye nje ndizama ukukhumbuza uHana izibakala. Waye ondingcikivayo yakhe, beqhayisa phezu kwakhe, imkhathaza.
Oku kuvakala kanye njengokuba wonileyo kuthetha. Njani na ukuthetha ngeqhayiya? Kulungile kubonakala ngathi uPenina ke ukusebenzisa oku njengendlela yokuzilungiselela yena uHana. Kubonakala ngathi ukwi babecinga ukuba ngandlel 'kuzala abantwana benza ngcono yakhe ngaphezu uHana, leyo akuyonyaniso. Isibhalo uthi ngokucacileyo ukuba abantwana sisipho esivela kuYehova. UPenina wayethetha ngebhongo, kwaye uya kuziphendulela kuThixo ngayo.
Iindlela Singathetha Sinebhongo
Enoba iyiqonde okanye hayi, sonke sithethe ngeqhayiya bathetha ikratshi kwindawo ezahlukeneyo iindlela:
1. Enye indlela obonakalayo ukuqhayisa ngezinto esizenzileyo. Ngamanye amaxesha asikwazi silinde ukuba sixelele abanye ngezinto nokuba yintoni itno kwaphunyezwa. Kodwa akuyi bemdumisa uThixo kuba; injongo yenza ngokwethu khangela ngcono. Ndiye ndanibambisa mna ukwenza oku izihlandlo ezininzi. Mhlawumbi ababalekela nomhlobo wakhe omdala baze bathi kum into bendikhe ukwenza. Mna ndithi UkuREPHA, kodwa ndingathanda kanye ukwalatha amabhaso okanye nezinye izinto.
2. Okanye njani ngezinto sithetha nabanye? Ngamanye amaxesha Uhlaze abanye. Sifuna Ungawapeyinta ungumntu ombi, ngoko siza khangela okulungileyo. Mhlawumbi emsebenzini siyazixelela ukuba ethile intsebenziswano-worker kuyinto eyonqenayo, ukuze abantu baya phawula umahluko phakathi ezimbini. Okanye mhlawumbi endaweni onobabalo nabanye, siza self-amalungisa. Sime njenge nomgwebi phezu kwabo, kuba loo nto yenza ukuba uzive bhetele esizenzileyo ngokomoya. Ukuba intetho nekratshi.
3. Okanye ngamanye amaxesha naxa izinto ezilungileyo sithi. Mhlawumbi loo nto bubungqina ngobusuku bangeCawa. Isenokuba ibali nelibali ngomsebenzi kaThixo ebomini umhlobo, kodwa neenjongo zakho nako abe sisihombo sakho endaweni kaThixo. Okanye umntu ikuvumela ukuba uye bethandazela kubo. Okanye efundisa kwiklasi yesikole sangecawa. izinto ezintle Nokuba kunokuba intetho nebhongo ukuba usukelo lwakho sazenza.
Eminye yale mizekelo zisekuhleni ngaphezu kwabanye. Ngoko ke wazi njani ukuba? Yintoni eyahlula intetho esiyakuzingca zibakala echaza? Ukuthetha ngebhongo kuxa wena musa ukumvumela uThixo njengoko Lowo ukuba enguMongami, lifanelwe uzuko, entliziyweni yakho okanye amazwi ngokwabo. Ke xa loo, thabatha uzuko bukaThixo thina.
amazwi akho no kuvuma kuThixo, kodwa kuthekani ngentliziyo yakho? Abanye abantu kuba nako ukuba sixele umahluko, kodwa uHana isikhumbuza ukuba uYehova nguThixo owazi. Ukuba sisebenzisa amazwi ethu yokuziphakamisa, siyakuba ukuphendula kuye kuba.
Kumbhalo uHana isixelela ukuba bathethe ngokuzingca, aze ke yena axelele ukuba kutheni: kuba uNdikhoyo nguThixo owaziyo kwaye inobunzima izenzo.
umbuzo 2: Kutheni Sitsala Ukuphendula kuThixo ngenxa Speech Neqhayiya?
Ngoba kuhlaselwa phezu kozuko lwakhe.
Ukuba mnye kuphela mabinzana mabini yokugqibela kwakunjalo, iza kuguqula kakhulu. Ukuba uThixo wayesazi, kodwa hayi ijaji, okanye ukuba uThixo ijaji, kodwa wayengazi. Kodwa ngokugqibeleleyo uMgwebi nje nayo umazi-onke uThixo. Kuphela uThixo uya kufumanisa, Umele uphulaphule. KaThixo ngawo onke amaxesha ukwenzela ukuba wonke incoko ngoko kwenzekayo. Phantse njenge Uye imali engenasiphelo khamera zokhuseleko zibekwe unyawo zonke iindawo zehlabathi. uyazi. Ke ukuba ahlasele uzuko lwakhe zentetho abanekratshi, Uya kwazi.
Ukuba mna ukuya kwi-akhawunti yakho yebhanki, uthabathe imali kwaye isicelo kwi-akhawunti yam, kukuba ubusela? Kunjalo ke. Ndiya uthatha into yomnye kuwe, kunye nokusebenzisa ngokwam. Andikwazi nditsale nayiphi na imali yakho ngaphandle kokuba oko kuwe. Kwaye akulunganga kuba kokwabo kuwe.
abantu xa sizama ukunika ngokwabo uzuko, baya baphanga uThixo wakhe. Awukwazi abalele wena indumiso nozuko, ngaphandle kubela uThixo. Ikratshi kukuhlasela uzuko lukaThixo. Ngoba? Ngenxa yokuba cingela ko avela ngaphantsi kaThixo. Makhe ndithethe loo nto kwakhona: yi cingela ko avela ngaphantsi kaThixo. Njengoko sibona 1 Samuel 1, le ngaphantsi kaThixo, kukhokelela ekubeni ngaphantsi kwabanye. Ngoko ucinga ngokugqithiseleyo ivela ukucinga ephantsi kakhulu kuThixo, kwaye ikhokelela ukucinga ephantsi kakhulu abanye.
UPenina ibiyimpazamo. Yena babebiza yena ngokubeka yena etroneni enguMongami, ngokungathi xa evula isizalo sakhe. Kwaye kaninzi unetyala efanayo. Sicinga ukuba sele abo kufuneka bafumane ikhredithi ngenxa yokuba ukukhuthazwa, okanye abo bantwana kakuhle baziphethe, okanye imeko yethu yemali. Ewe, UThixo uya kusivuza umsebenzi wethu onzima, kodwa ukuba akuqinisekisi nantoni. ukuthanda kukaThixo yeyona yeyonanto yokwenene zonke meko. Into ekugqibeleni ke amandla ethu, ubulumko yethu, okanye ukuthembeka kwethu.
Ngoko ikratshi kuphosakele. Sonke kufuneka ikratshi ezinye nisezintliziyweni zethu ukuba simele silwe. Xa ucinga ngentliziyo yakho ukuba ndifanele uzuko, ukuba ngokwayo sisono. Kodwa intetho nekratshi ejonge ukuya kwelinye inqanaba. Njani thina, ngabantu abanesono, kuba sokuyifaka, kuphela ukuba sele ufanelwe uzuko lukaThixo, okunene, kodwa ukuba bazichaze ukuba indlela abanye? Ukuzama abanye baqonde ukuba asinike ubuqaqawuli bukaThixo kuphela. Ukuthetha ngebhongo ufana ibimenza kuphela umntu, kodwa xelela wonke ngayo kwaye ebakhuthaza ukuba benze okufanayo.
Into kuphela, UThixo akuyomfuneko yokuzonwabisa bhanyabhanya ukwazi ukuba unetyala. UThixo akayi kukunyamezela abantu ezama rob kuye uzuko lwakhe nokukhuthaza abanye ukuba benze okufanayo. Yeyiphi thina kutheni uHana uthi kufuneka ukwenze oko.
intetho nekratshi uya kukusa ukulwa noThixo, nto ke leyo ebangele ukuba engangqinelaniyo ngobomi likholwa. Njengoko sivile ngale ntsasa, "UThixo uyabachasa abanekratshi, kodwa abababale ke abazithobileyo. "
Ukuba awukho kuKristu, amazwi ethu nebhongo, iya kuba esinye isizathu sokuba uThixo ukusohlwaya. yezenzo zethu ezibi kuya kuqhubeka ukunceda ityala obuninzi nxamnye nathi. Ukuba awunguye kuKristu, akukho nto enkwantyisayo ngaphezu uMgwebi esazi yonke. Ngoko ke, ukuba ulapha ngokuhlwanje kwaye musa uYesu, nceda ukuba bamazi. Babuya esonweni senu, kwaye ziphose inceba yakhe. Yena luvalo othobekileyo-athobekileyo ngokwaneleyo ukufa ukuze aboni nje ngam nawe onokuphila. Wavuka kwelabafileyo onke amandla, kunye nokufowuna amadoda ukuba simlandele. Singavuya umthande ukuthetha nawe ngakumbi ngalo kamva.
Kodwa njengoko amaKristu, kuthetha ntoni ngenxa yezenzo zethu ukuze kulinganiswe? likholwa ngalinye kweli gumbi uya kuziphendulela kuThixo onke amazwi abanekratshi bathetha, kodwa isigwebo zethu ziya kwahluka. UKristu sele izono zethu emnqamlezweni. Kodwa oku isilumkiso kufuneka nangoku nefuthe kwindlela esiphila. Xa kuma phambi koThixo, izenzo zethu noba kungqina isibakala sokuba sibe ukholose kuKristu okanye ukuba bayazingca kakhulu ukuba sithembele kuKristu kuphela.
ngokunjalo, sifuna ukukholisa uYise. Kunjalo uyakuvuyela nathi kuKristu, kodwa sifuna ukuba uyakholiswa imisebenzi yethu elungileyo ukuba uphume ukholo kuKristu. Sifuna ukukholisa uThixo wethu onothando.
Asimele sivumele amazwi nekratshi ukuza emilonyeni yethu. Kwaye nangona uya kuziphendulela kuThixo ngenxa kwintetho yethu nebhongo, simele kumdumisa uThixo ukuba izono zethu zigutyungelwe kuKristu.
Ngoko ukuba sifuna uThixo azukiseke kwintetho yethu, njani thina ukulwa le ntetho nekratshi?
umbuzo 3: Njani sixabane kwiNtetho Neqhayiya?
Siza kukwenza oko ngokuthi nemihlali kuThixo.
Sifanele babukele intetho yethu, kodwa oko akwanelanga. Loo nto ifana uxelele umntu ebandayo Isisombululo nje ukubamba uthimlele yabo. Hayi, esi sifo into ekufuneka kuhlaselwa.
Intliziyo abanekratshi idlamkile ngokwayo. Kodwa intliziyo othobekileyo ndigcobile ngoThixo. Jonga amagama yokuqala Umthandazo kaHana kwivesi 1: "Intliziyo yam idlamkile ngoYehova." KaHana ibonisa ukuba impendulo efanelekileyo intsikelelo weNkosi. Hayi bevuya nje oko iNkosi yamnikayo, kodwa uMniki ngokwakhe. impendulo zethu onokuba nebhongo, kodwa endaweni yoko kufuneka kuvelisa ukuthobeka kuthi, kuba samkela isipho esivela kuThixo
UThixo unika alithabathe. UThixo wahambisa ne endyebo. Kodwa konke okulungileyo zethu uzuko lwakhe. Thina lukholo xa siqalisa ukuba sixhomekeke kwezo zinto kakhulu. Ndidlala uThixo ubulala zombini Ikratshi lithemba.
Njani kuvuya ngoThixo? Yenza into efunekayo ukuze uzikhumbuze ngubani ngasemva yonke. Mdumise uThixo xa ufumana ukuba itsheki. Le nto nathi siyabulela kuye uThixo phambi ukutya kwethu. Ukukhumbula ukuba oko nekratshi ukucinga izicwangciso zethu ziya kusoloko kuphuma. Xela ukuba iNkosi ithandile. Zukisa uThixo xa abanye Siyavuyisana kwi azenzileyo yakho. Ngaba umzuzu ukuvumela intliziyo yakho ukuze ndingaqhayisi. Bukela intetho yakho nekratshi. Fumana iingcambu yekratshi entliziyweni yakho.
Ngamnye kuthi unikwe ithuba emangalisayo igama ngalinye sithetha. Sifumana ukusebenzisa amazwi ethu bamzukise uThixo owadala thina. Sifumana ukusebenzisa amazwi ethu ukunceda abanye babone uThixo iNkosi yozuko ukuba Yena.
Ngoko ukhuthazo kwam ukusebenzisa amazwi enu ukuba usazenza. kunokuba, ukusebenzisa ukuba benze izinto zadalwa ukuba wenze-besiza kuzukisa uThixo. yeyakho kuye kakade.
aimsbaker • EyoMsintsi 10, 2013 ngexesha 1:39 pm • impendulo
Oku yayihlaziya wohlwaye. Enkosi kakhulu! Ndiye ndafumana ezinye ukufunda ukwenza ukwakha iinkolelo zam phezu oku nikwazi.
faithchanda171 • EyoMsintsi 10, 2013 ngexesha 1:47 pm • impendulo
inkosi othandekayo,nemihlali yethu wena wedwa ufanelwe yonke glory.help ukuba inkosi ukuba nemihlali ngawe usoloko hayi uphulukane ubuqaqawuli bakho yaye sonke kuthotywa phambi. Usixolele kukhathaza nabantu xa sithetha likratshi. Ukukholisa uncedo oyintanda ukuba abe nesazela ngakumbi izinto sithi…Amen
Godson • EyoMsintsi 10, 2013 ngexesha 1:52 pm • impendulo
uMdali, namnye ukuba mkhulu uMsindisi umdlalo-ngokutshintsha / idemon ababulali kungekho mfuneko ukuba umdlali
Christopher • EyoMsintsi 10, 2013 ngexesha 2:24 pm • impendulo
Abantu intshayelelo wanditsalela kwi…ke inyaniso! Ukususela ndiye kuba nabantwana bam ndizibona kubo mihla. wonke umyalezo nokubahlangula wandisikelela! Makube lubabalo, noxolo!
Unoyolo • EyoMsintsi 10, 2013 ngexesha 3:16 pm • impendulo
Ngoko okunesondlo! Enkosi! ndiyakuthanda Oku: “Ukuthetha ngebhongo kuxa wena musa ukumvumela uThixo njengoko Lowo ukuba enguMongami, lifanelwe uzuko, entliziyweni yakho okanye amazwi ngokwabo. Ke xa loo, thabatha uzuko bukaThixo thina” kwaye oku:”Xa kuma phambi koThixo, izenzo zethu noba kungqina isibakala sokuba sibe ukholose kuKristu okanye ukuba bayazingca kakhulu ukuba sithembele kuKristu yedwa.”
QuincyStroman • EyoMsintsi 10, 2013 ngexesha 3:45 pm • impendulo
INkosi kusetyenziswa ukuba Khuthaza kum ngelizwi… An Thass Iindaba Ezilungileyo
eveno M. • EyoMsintsi 10, 2013 ngexesha 3:48 pm • impendulo
Oku efundiweyo emangalisayo. Nakuba wokuthobeka kwethu, kufuneka silumke ukuba benza njani ukuze abantu babone ukuba sithobekile, leyo ngokwayo nekratshi.
Ichaza ukuba kutheni zobulumko zamaGrike abazange bakholwe ukuba ukuthobeka yaba isidima kuba baninzi, ukuqhatha.
jason • EyoMsintsi 10, 2013 ngexesha 5:29 pm • impendulo
Andizimisele ukuze bamphose Uhambo phantsi ibhasi okanye nayiphi na injongo uqalise ingxoxo online. Ndiyabuza kuphela ingcaciso. Mna owayesandul ukhangela umsebenzi. Njani na ukuthetha ngokuziqhenya udliwano apho kufuneka ngandlel 'ithile ukuba mawuzive malunga echaza mpumelelo ezilungileyo abaqeshi kunokwenzeka?
Trip Lee • EyoMsintsi 11, 2013 ngexesha 10:40 mna • impendulo
Uyafana esingaphosi kum phantsi bro ibhasi! Ndicinga ukuba umbuzo kakhulu. Njengoko sekutshiwo ngasentla, intetho izidlayo xa usebenzisa amazwi akho ukuze usazenza. Oko xa ungavumi ukuvuma uThixo enguMongami, lifanelwe yozuko.
Uyakwazi ukuchaza impumelelo yakho uze uqiniseke umntu Ndingathanda ukwenza umsebenzi omhle ngaphandle ndiqhekeze UThixo wozuko lwakhe (emveni kwakho konke, ukuzinikela kwethu kuye kufanele ukuba akhokele ukusebenza ngabugcisa). Awunayo ukuthi “kuye makubekho uzuko” qho emva isigwebo, kodwa kufuneka wenze yonke kunye awayeme ingqalelo uThixo waso zonke izipho ezilungileyo. Kukho umahluko omkhulu phakathi ngokuzithoba ngokwalatha ubuchule bakho okanye ngenkohlakalo beqhayisa. Yenza ingqondo?
kaYese • EyoMsintsi 11, 2013 ngexesha 1:13 pm • impendulo
Njani, kwinkcubeko frowns emva kokuba wavakalisa amaxabiso abangamaKristu, simele sicinge ukuba, ubambe sibene ohlawula, ngaphandle ikratshi kwethu ukufumana ezona kuthi? Mna Kwakhona ndizama kukuphosa phantsi ibhasi kwaye bafumane iimpazamo, kodwa elivisayo efuna ngamandla ukuba baphile ubomi “yokuphila unashamed” wawaneka iindaba ezilungileyo kuyo yonke into ayenzayo, Kwakhona kufuneka umsebenzi. Ndicinga ukuba le ngxaki ukungabinako ukuvakalisa ukuzincama kwethu kwindawo yokusebenza ngaphandle nokoyika kudutyulwe.
John • EyoMsintsi 11, 2013 ngexesha 8:58 mna • impendulo
Kanye wathi, ukuthetha izinto eziphakamileyo olu asiyonto nje echaza. Loo nto ufuna ukuba usazenza endaweni kaThixo. Unokundanelisa umntu Ndingathanda ukwenza umsebenzi olungileyo, ngaphandle ndiqhekeze uThixo uzuko emfaneleyo ngenxa ubuchule bakho kunye nogqweso kumsebenzi
DaughterofGod • EyoMsintsi 11, 2013 ngexesha 1:27 pm • impendulo
Mna basebunzimeni esi sicatshulwa: “Xa ucinga ngentliziyo yakho ukuba ndifanele uzuko, ukuba ngokwayo kusisono.” Xa enze into entle kakhulu, Ndinqwenela egxeni ngasemva, ukubakhuthaza, okanye ibonisa ukuba umsebenzi wam sifunyenwe njengebalaseleyo. Siyamdumisa kwiimbaleki zemidlalo kumaqela besoma, yaye ihlabathi lethu liphela isebenza kwi amabhaso namaqonga ezizukisa ukugqwesa. Ngoko ke kunokwenzeka 'abhubhise indlela’ lo mnqweno wam xa, ngokunyaniseka, Andifuni ukuba? Ndiyaqonda nje nge, ezintliziyweni zethu, evuma ukuba ukugqibelelela wethu umsebenzi wezandla zethu uvela kuye, yaye balele onke amawonga siyakwamkela kuye.
Michael • EyoMsintsi 11, 2013 ngexesha 1:49 pm • impendulo
Ndifuna nje ukuba ukuthatha eli thuba ndibulele kuwe (Trip Lee) zokuqeshisa uThixo sebenzisa ukuba kumzukisa. Mna nomfazi wam ngokwenene ukonwabela umculo wakho. yethu ndiyithandayo kunjalo na “into elungileyo”. Ndafunda ukuba yayekwa ukwenza umculo ukuqhubela phambili ubulungiseleli bakho, oku kuyinyaniso? Sifuna Rappers afana nawe bhuti.
JB • EyoMsintsi 11, 2013 ngexesha 3:46 pm • impendulo
Uhambo Ndivumelana uninzi yonke into ezikhankanywe kule blog malunga ixabiso amazwi ethu ngaphandle ingxelo ukuba wenza ukuba “UThixo unika alithabathe kwaye isasaze kunye ongafuni-”. uThixo 100% kulungile! Akukho nje ukanti ezimbi kuye ukuzama ukwenza ukwenzakalisa okanye nantoni na kuthi. uSathana weba (kuthatha / endyebo), zizibulale, latyhaphaka. Thina enkolweni (okanye non-amakholwa) ntoni kuthi ngokungathobeli (okanye bengabazi) umgangatho lokomoya uThixo Sele emhlabeni. UThixo ukuthiyile ikratshi ikakhulu ngenxa zingabangela ukuvaleka ukufumana ukulunga yobuya ukuze sithenge ufuna sibe esikwazi uSathana (nemikhosi yakhe) ilungelo elisemthethweni ukuza ze kugxininiswe iindlela zethu ngekratshi. Oku angamthiyi intetho okanye uzama ukuthetha phantsi wena kodwa incoko esivulekileyo Ndiyakholwa na ingenelo blog.
Trip Lee • EyoMsintsi 12, 2013 ngexesha 1:23 pm • impendulo
Enkosi ukufunda! Yaye amazwi akho akhuthazayo. Ndiyangqinelana nawe ukuba uThixo 100% kulungile. Akukho mathandabuzo ngaloo nto. Kodwa loo nto ayithethi ukuba bayithathe. Kuthekani Job 1:21? Ezinye oko ndathi ngasentla kwakukho locaphulo babizi ndinyana. "Ndaphuma ndize esizalweni sikama, kwaye ndiya kuya. UNdikhoyo wanika kunye neNkosi othabathileyo; ukuze igama leNkosi kudunyiswa. "
Ngoko uThixo kusisusa, Kwaye nangoku kakuhle. Into entle kukuba, UThixo usebenzisa nokuba izinto ezimbi okulungileyo ebomini babantu bakhe. KwabaseRoma 8:28 ngumzekelo omhle kule. Ukuze babhale yonke isithuba ukuze ndingenza kucace ngakumbi. Enkosi kwakhona ukufunda!
RW • EyoMsintsi 11, 2013 ngexesha 8:35 pm • impendulo
Njengoko Uhambo ekhankanywe, UThixo wazi yonke. Enoba ngaphandle kuzukisa uThixo elikhulu okanye ikhredithi ngenxa eziyimpumelelo ngokuvakalayo, UThixo uyazi ukuba ngubani intliziyo yakho enika uzuko. Ethetha kuzuko lukaThixo ngokuvakalayo kwakhona kuba intetho ikratshi ukuba intliziyo yakho, akunikayo ngokwenene uzuko kuThixo. Xa rhoqo zithetha uzuko lukaThixo ngeenxa abangakholwayo, bafana uPenina thina kunye abangakholwayo zifana uHana. NjengamaKristu siye anento thazeka xa singakwazi ngokuphandle ukumdumisa uThixo. Phakathi abangakholwayo senza Penenniah abakunye intsikelelo yokomoya endaweni abantwana kunye abangakholwayo ke uHana eseleyo ngaphandle iintsikelelo ezifana uHana ngaphandle abantwana. Koko sivakalelwa kukuba indumiso kuThixo, Kwandile Asiqhayisi iintsikelelo zethu. Simele sikulungele zimdumise uThixo ngawo onke amaxesha, kodwa kufuneka ungalibali malunga imiphefumlo elahlekileyo abakhetha sibe naYe. Ungathatha ingqalelo eziyimpumelelo kwaye athathe uxanduva ngaphandle kokuthatha uzuko kude kuThixo. Ufumene ezo ntsikelelo kuba bakhetha ukuhamba endleleni yakhe. Zukisa uThixo entliziyweni yakho, iingcinga, kunye nemithandazo. amazwi akho nje ukuba, amagama. Amanga mhlawumbi. Ukuba ndlebe ungabuzi ukuba ndenze izinto ukhe wenze, sebenzisa ukholo elithi. Ukholo ukhetho lwakho, ngokuzikhethela uThixo wakho amnyulileyo ukuba anisikelele, ngokunika uzuko kuthixo ezo ntsikelelo Uya kuqhubeka ukwenza njalo. Ngenye inqaku, ukuba kunzima ukufumana umsebenzi ukuzama ukufikelela kuThixo ngakumbi.
jonathan • EyoMsintsi 11, 2013 ngexesha 8:53 pm • impendulo
Lo ngumyalezo lufuna mna ukuva. Ndizibona olwalusilwa self-ubulungisa nokuba izithuba Facebook Zithetha ngoThixo. Ndiyaqonda ukuba kufuneka ukuba bajonge nzulu neenjongo zam yonke ndiya kwenza. abazalwana bam noodade kuKristu, ukuba y'all wayeza, thandazele!
UMegan • EyoMsintsi 11, 2013 ngexesha 10:27 pm • impendulo
enkosi kakhulu ngokwabelana imiyalezo yakho. ndiyaphila 14 kunye nosapho lwam ukuya ecaweni ukuze i uyifuna ngokwenene oku kunye nezinye izibonelelo abangamaKristu yimpahla, ukuba nindincede bana phandle yintoni kuthekani ngokholo ukuba yenza ibhadlile ukuze enkosi ngokwabelana luncedo yayo ngenene yaye kukhuthazwe.
JB • EyoMsintsi 12, 2013 ngexesha 3:35 pm • impendulo
Yemba ukuba Uhambo. Kuxabise bro ingxelo kodwa ngelishwa siyakuba ukuvumelana ukuba nineembono ngeli. Hleka kakhulu.. Kukho kwivesi uYobhi ukuba ithi “UThixo unika yena alithabathe” kodwa amazwi kaYobhi uThixo. UYobhi singamalungisa yaye singabangasolekiyo emehlweni kaNdikhoyo, kodwa mzuzu wathetha loo mazwi Kwathi ukusuka kwindawo ningazi ngokombono azibona ngayo uThixo utyando. Ukufunda eseleyo kaYobhi (ngokukodwa kwizahluko 38-41) UThixo ethetha kuYobhi ngendlela ningazi uthethe kuye aze abuze imibuzo malunga neengcinga zakhe. kuYobhi 42:3 (YIBHILE) UYobhi wamphendula uThixo wathi: “Undicele, 'Ngubani ocinga ukuba ukungavumelani izicwangciso zam? Anikwazi oko uthetha ngako.’ Ndathetha ngezinto ndingasiqondi ngokupheleleyo. Sasincokola izinto ezibalulekileyo kum ukwazi.” Emva koko kwi-6 ivesi uYobhi wathi: “Ngoko endiyithiyileyo nam. Ndicela ngokwenene buhlungu ngenxa yoko ndathi ngawe. Yiloo nto mna ndihleli ndiseluthulini naseluthuthwini.” Emva wazohlwaya oko xa uqale kwakhona ukuya kakuhle ngokwenene kuye. UThixo wayefuna ukuba ubone abazange bayithathe zonke iimpahla zakhe (ukuba uSathana) kwaye yaba Job uloyiko ziboniswa ekuqaleni ncwadi bayavunyelwa uSathana ukuba ungene ebomini bakhe. Uhambo andifuni ukwenza bonisa ihambo yethu 'kwicandelo izimvo’ ngoko ke ukuba ubona kuyimfuneko uqhagamshelane nje email yam impendulo. Umnqwazi italente yakho nentliziyo yakho ukuba ukukhonza uThixo umntu. ngelinye ixesha
ezezimali • EyoKwindla 28, 2017 ngexesha 4:13 mna • impendulo
amanqaku Umgangatho okanye izimvo imfihlelo ukuba kugxininiswa ukuba
abantu ukuba andwendwele page web, yiloo nto le site web libonelela.
program • EyeNkanga 23, 2017 ngexesha 3:14 mna • impendulo